कसरी औषधिको बेवास्ता गर्ने चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कल्याण कल्याण औषधि जानकारी, समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> अप्रयुक्त औषधीबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ
तपाईंको औषधि क्याबिनेट खोल्नुहोस्। संभावना कत्ति राम्रो छ कि तपाईले केही पुरानो औषधिहरू कतै पाउनु भएको छ। अप्रयुक्त औषधिहरू समात्नु कुनै ठूलो कुरा जस्तो देखिन सक्छ, तर त्यसले व्यक्तिलाई खतरामा पार्छ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको बाँकी पेन्किलरहरू जसको लागि उनीहरूले सिफारिस गरेको बाहेक अरू कोहीद्वारा प्रयोग गरिन्छ। यो ओपिओइड संकटको एक महत्वपूर्ण चालक हो, भने क्र्याग के। स्वेन्सन , Pharm.D।, पीएचडी, डीन इमेरेटस र औषधीय रसायन विज्ञान र आणविक फार्माकोलजीको प्राध्यापक पर्द्यू युनिभर्सिटी कलेज फार्मेसी ।
तर बाँकी पेन्किलरहरू मात्र औषधीहरू होइन बाहिरबाट हेर्छ sur तर अतिरिक्त एन्टिबायोटिक र अन्य औषधिहरूले पनि खतरा निम्त्याउन सक्छ। मैले विषालु नियन्त्रण केन्द्रमा वर्षौंसम्म काम गरें, र म भन्छु कि बच्चाहरूलाई कति पटकसम्म औषधीमा पसे पछि विष दिइन्थ्यो, स्भेन्सनले भने।
यद्यपि, रद्दीटोकरीमा ती गोलीहरू मात्र टस नगर्नुहोस्। यो सुरक्षित तरिकाले औषधिको कसरी डिस्पोजल गर्ने भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको अनावश्यक पुरानो नुस्खाहरूको साथ के गर्ने भनेर यहाँ छ।
१. स्थानीय औषधि निवारण कार्यक्रमको लागि जाँच गर्नुहोस्
तपाईंको प्रयोग नगरिएको वा म्याद सकिएको औषधिहरू हटाउने उत्तम तरिकाहरू स्थानीय डिस्पोजल प्रोग्राम मार्फत हो यु एस खाद्य र औषधि प्रशासन ।
धेरै फार्मेसीहरूका मेडिसिन टेक-ब्याक प्रोग्रामहरू छन्। यो फार्मेसी भित्र सामान्यतया ड्रप बक्स हुन्छ जहाँ तपाईले आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन बोतलहरु राख्नुहुन्छ र फार्मेसीले ती सुरक्षित रुपमा निकाल्नेछ, स्भेन्सनले भने। चयन गर्नुहोस् CVS फार्मेसीहरू अनावश्यक पर्चेको औषधिहरू स्वीकार्नुहोस्। Walgreens फार्मेसीहरु प्रस्ताव DisposeRx बक्सहरू छनौट स्थानहरूमा।
केही अस्पतालहरू, क्लिनिकहरू, र पुलिस स्टेशनहरूले सुरक्षित औषधि बेवास्ता गर्न अनावश्यक औषधीहरू पनि स्वीकार्छन्। तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ तपाईंको क्षेत्रमा नियन्त्रण पदार्थ पदार्थ निपटान स्थानहरू संयुक्त राज्य औषधि प्रवर्तन प्रशासन (डीईए) को माध्यम बाट।
कसरी खमीर को शरीर छुटकारा पाउन
सम्बन्धित : फार्मासिष्टहरूले प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दुरुपयोग रोक्न कसरी मद्दत गर्न सक्छन्
२. खतरनाक औषधीहरू फ्लस गर्नुहोस्
तपाईंको क्षेत्रमा औषधि टेक-ब्याक प्रोग्राम फेला पार्न सक्नुहुन्न? चिन्ता नलिनुहोस् — तपाईंले आफ्नै बाथरूममा एक डिस्पोजेसन विकल्प पाउनुभयो: शौचालय।
तपाईंले कुनै पनि ड्रगहरू फ्लस गर्नु पर्छ जुन कसैले सम्भावित दुरुपयोग गर्न सक्दछ, जस्तै ओपियोड्स वा झ्यानाक्स, स्वेन्सनले सल्लाह दिए।
हरेक प्रकारको ड्रग फ्ल्यास हुनु हुँदैन। शौचालयमा बोतल खाली गर्नु भन्दा पहिले डिस्पोजल निर्देशनहरू खोज्नुहोस् जुन तपाईंको प्रिस्क्रिप्शनको साथ आएको हुन सक्छ। वा, प्रयोग गर्नुहोस् एफडीएका सिफारिसहरू । तपाईंले फ्लस गर्नु पर्ने ड्रग्सले समावेश गर्दछ (ब्रान्ड नामहरूको उदाहरणका लागि लिंक हेर्नुहोस् जहाँ यी सामग्रीहरू फेला पार्न सकिन्छ):
बेन्जहाइड्रोकोडोन / एसिटामिनोफेन
शौचालयमा औषधी फ्लश गर्दा वातावरणलाई हानी पुर्‍याउने त्यहाँ केही चिन्ता छ, यी खतरनाक औषधीहरूले मानिसहरूलाई चिनाउने सम्भावित खतरा धेरै चिन्ताको विषय हो, स्भेन्सनले भने।
उनीहरुको लागी ड्रग्सलाई बदल्ने र दुरुपयोग गर्ने जोखिम वास्तवमै बढी छ र आंशिक रूपमा ओपिओइड स driving्कट चलाउँदै छ, त्यसैले त्यस्ता औषधीहरु लाई फ्ल्याश गर्नु त्योबाट बच्न उत्तम तरिका हो, उनले भने।
Un. अनावश्यक औषधि रद्दीटोकरीमा फाल्नुहोस्
एक ड्रग-ब्याक प्रोग्राममा फ्लश हुन नहुने औषधिहरू ल्याउँदा प्राथमिकता दिइन्छ, यदि आवश्यक छ भने तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको घरको रद्दीटोकरीमा टास गर्न सक्नुहुन्छ। कुञ्जी तिनीहरूलाई सकेसम्म अपीलकारी बनाउनु हो।
तपाईंले औषधिलाई रद्दीटोकरीमा हाल्नु पर्ने हुन्छ कि जनावरहरू र मानिसहरूले उनीहरू उपभोग गर्दैनन्, स्भेन्सनले भने।
एफडीएले औषधिलाई कुनै चीजलाई नमिल्ने चीजको रूपमा मिक्स गर्ने सिफारिश गर्दछ, जस्तै किट्टी लिटर, कफि मैदान, वा फोहोर। त्यसो भए, मिश्रणलाई यसको आफ्नै कन्टेनरमा खाली गर्नुहोस्, पुन: बिक्री योग्य प्लास्टिकको झोला (चुहावट रोक्नको लागि), र त्यसलाई तपाईंको रद्दी टोकरीमा राख्नुहोस्।
तपाइँको औषधीको भाँडो बाहिर फाल्नु वा पुन: साइकल गर्नु पर्छ। स्थायी मार्कर को उपयोग कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी कालो, को रूप मा तपाइँको गोपनीयता को रक्षा गर्न को लागी तपाइँको नाम, ठेगाना, प्रिस्क्रिप्शन नम्बर, र औषधि को नाम कालो गर्नुहोस्। अझ राम्रो, सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण लेबल बन्द गर्नुहोस्।
यस्तो जस्तो देखिन्छ कि अव्यवस्थित क्याबिनेट अनावश्यक औषधिले उत्पन्न गरेको समस्या हो। तर जब निश्चित औषधीहरू गलत हातहरूमा समाप्त हुन्छन्, परिणाम घातक हुन सक्छ। तपाईका पर्चे सुरक्षित रूपमा भण्डार गर्नुहोस् them र राम्रोसँग डिस्पोजेसन गर्नुहोस् जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दैन।
tylenol अतिरिक्त शक्ति यसमा एस्पिरिन छ
के तपाइँ स्तनपान गराउँदा जन्म नियन्त्रण लिन सक्नुहुन्छ?
कति मानिसहरु अमेरिका मा मोटापा छन्
ह्या fastest्गओभर बाट छुटकारा पाउने सबैभन्दा छिटो तरीका
az प्याक के उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ
xarelto र eliquis बीच के फरक छ?